Ireo antony tsy famandrihan'ny olona ny mailakao (sy ny fomba hampihenana ny famandrihana) | Martech Zone
Ireo mpamandrika dia tsy miraharaha izay mahasamihafa ny famoahana ny famandrihana sy ny fanamarihana fotsiny ny mailakao ho SPAM… ataon'izy ireo isan'andro izany. Tsy tsapan'izy ireo ny valin'ny fitaterana ny mailakao satria ny SPAM dia afaka manakana anao avy amin'ny boaty fisoratana anarana an'arivony maro hafa amin'ny mpamatsy tolotra Internet iray ihany. Izany no antony hanaraha-maso akaiky ny fametrahana boaty miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay 250ok!
Ka ny fanafenana ny rohy tsy hisoratra anarana amin'ny mailakao dia TSY ny hampihenana ny isan'ny tsy fisoratana anarana, fa hahatonga anao hanana olana amin'ny fametrahana ny boaty. Aza gaga raha misy fanovana madinidinika nataonao tamin'ny maodelin'ny mailaka nataonao mba hanasarotana anao amin'ny famandrihana ny famonoana ny famonoana ny boaty fampidirana anao ary ny tahan'ny tsindry Click-through ary ny tahan'ny fiovam-po avy amin'ireo mailakao.
Antony lehibe mahatonga ny olona tsy hisoratra anarana amin'ny mailaka nataonao
Mailaka ratsy famolavolana na mandika (aza adino modely mailaka mamaly finday).
Email be loatra na voafetra hatetika. Izany no antony anolorantsika famandrihana isan'andro sy isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny mailaka alàlanay CircuPress.
Mandefa mailaka tsy misy alalana.
ilaina atiny mailaka. 24% n'ny responde BlueHornet no nilaza fa hiala satria tsy misy ifandraisany ilay mailaka!
Faran'ny tolotra na amidy.
Manafintohina na mamitaka foto-kevitra tsipika.
Tsy fahampian'ny personalization (na dia mieritreritra aza aho fa ratsy indrindra ny tsy miankina).
Fanovana ny safidinao, toy ny fandaozana orinasa na indostria.
Ity infographic avy amin'ny EmailMonks manolotra torohevitra tsara momba ny fanatsarana ny safidinao famandrihana sy fampiharana fomba fanao tsara indrindra hanatsarana ny fitazonana ny lisitrao sy hampihenana ny isan'ny tsy misoratra anarana.
Tags: famolavolana mailakamailaka matetikatolotra mailakapersonalization mailakatsipika momba ny mailakamandika ny mailakamailakafihazonana lisitraivon-toerana fanirianafoibe famandrihanaesory ny fomba fanao tsara indrindraantony unsubscribemaninona ny olona no misoratra anarana